ကိုယ့် ကို စိတ်ကုန်သွား တဲ့ ချစ်သူ မိမိ ထံအမြန်ဆုံး စိတ်ပြန်လည်လာေ စမယ့် အစီရ င်’ – Shwe Ba
ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား ….?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား ….?အိမ်ထောင်သည် ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့ အိမ်ရှင်မများ စိတ်သောက ရောက်နေပြီလား ….?လိုအပ်တာကတော့ ….. – စတီးပန်ကန်ပြား ၁ချပ် ဆန် (၁)ဘူး– ကွမ်းရွက် (၃)ရွက် – ဖယောင်းတိုင်
– မိမိချစ်သူ ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံ – သော့ခလောက် (၁)ခု ပြုလုပ်ပုံကတော့…. စတီးပန်ကန်းပြားပေါ်တွင် ဆန်တစ်ဘူထဲ့ပါ။ ပြီးလျှင် မိမိချစ်သူ ဓာတ်ပုံတင်လိုက်ပါ …။ထိုဓာတ်ပုံပေါ်တွင် ကွမ်းရွက်၃ရွက်ကိုတင်ပါ။ထိုကွမ်းရွက် တရွက်ချင်းစီတွင် မိမိဖြစ်ချင်လိုသော ဆန္ဒများရေးပါ။ ကွမ်းရွက်၃ရွက်စလုံးတွင်ရေးချပါ …။
– အချစ်ရေးအဆင်ပြေပါစေ ကိုယ့်ဆီအမြန်ဆုံးအဆက်အသွယ်လုပ်ပါစေ ရေးပါ …။ပြီးလျှင် သော့ခလောက်ကိုတင်ပါ။ ထိုသော့ခ လောက် ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်အဝါရောင်၂တိုင် ထွန်းရပါမယ် …။ဤအစီအရင်ကို ပြုလုပ်မည့်သူ မိမိမွေးနေ့တွင်ပြုလုပ်ပါ …။(ဥပမာ -မိမိက စနေသမီးဖြစ်နေပါက စနေနေ့စပြုလုပ်ရမည်) (၃)ရက် တိတိဖယောင်းတိုင်ပဲထွန်းရမည်။ကျန်ပစ္စည်းလဲစရာမလိုပါ …။(၃) ရက်ပြည် လျှင် ရေ ထဲစွန့်ပါ …။အချိန် – မနက် (၁၀)နာရီ အတွင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ် …။
ဆရာမ စုစုနိုင် (ဗေဒင်နှင့်ယတြာ)